ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဟူသည် . . . – Eleven Media Group
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဟူသည် . . .
Posted on September 10, 2018 September 11, 2018 by Eleven Media Group
မိမိ ရွေးချယ်ထားသော နယ်ပယ်တစ်ရပ်၌ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ခြင်းဟူသည် ဂျုတီကုတ်ကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်လိုက်ခြင်း၊ ဘွဲ့လက်မှတ် တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာထူးတာဝန်တစ်ခု၌ ရှိနေခြင်း အစရှိသည်တို့ထက် များစွာပိုပေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လစ်ဇင်ဟူသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းရေးရာကိစ္စရပ်များ အတွင်း မိမိကိုယ်တိုင် မည်သို့မည်ပုံ စောင့်ထိန်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်သနည်းဟူသည်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ စစ်မှန်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များသည် မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား၌မဆို အကျုံးဝင်နိုင်သည့် အရေးကြီးသော စရိုက်လက္ခဏာရပ်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။
အသွင်အပြင် – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးသည် အသွင်အပြင်အရ သပ်ရပ်နေရမည် ဖြစ်သည်။ မိမိကုမ္ပဏီ၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာသည်ထက်ပင် ပိုမိုရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်လျှောက်ထားသူများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း ဖောက်သည်များကို တွေ့ဆုံရသည့်အခါ မိမိအသွင်အပြင်ကို ပို၍ပင် ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။
ပြောဆိုပြုမူပုံ – မိမိ၏ ပြောဆိုပြုမူပုံသည် ယုံကြည်မှုရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း မောက်မာထောင်လွှားသော ပုံစံမျိုးပေါက်မနေစေရန် လိုအပ်သည်။ ဖောက်သည်များ၊ အထက်လူကြီးများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ စသဖြင့် မည်သူနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရာ၌ဖြစ်စေ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုရန် လိုအပ်သည်။ တင်းမာနေသည့် အနေအထားများ၌ပင်လျှင် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းထားနိုင်ရန် လိုအပ်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှု – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်ပြီးမြောက်စေရေး နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရန် မိမိအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိလာစေရန် လိုအပ်သည်။ လူများကို အလျင်အမြန် တုံ့ပြန်ရန်နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးထားသည့် ကတိအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် အရေးကြီးသည်။
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များသည် မိမိတို့နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူများ ဖြစ်လာရန် အားထုတ်ကြသူများဖြစ်သည်။ ယင်းကပင်လျှင် မိမိတို့အား အခြားသူများနှင့် ကွဲပြားလာစေရန် တည်ဆောက်နေမှုများ ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခြင်း၊ မိမိပရော်ဖက်ရှင်နှင့် ဆက်နွှယ်နေသော မည်သည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲများကိုမဆို တက်ရောက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြင့် မိမိ၏ ပညာရှာမှီးရေး လမ်းကြောင်းကို အဆက်မပြတ် လိုက်နေရန် လိုအပ်သည်။
ကျင့်ဝတ် – ဆရာဝန်များ၊ ရှေ့နေများနှင့် အစိုးရစာရင်းကိုင်များ ကဲ့သို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်ပတ်သက်သော တင်းကျပ်သည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း၌ ရေးဆွဲထားသော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ မရှိသည့်တိုင် မိမိအနေဖြင့် အချိန်တိုင်း ကျင့်ဝတ်နှင့် လျော်ညီသော အမူအကျင့်များကို ပြသရန်လိုသည်။
မိမိ၏ ဣနြေ္ဒကို စောင့်ထိန်းခြင်း – ခက်ခဲသော အနေအထားတစ်ရပ်ကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ၌ပင်လျှင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးသည် မိမိ၏ဣနြေ္ဒကို စောင့်ထိန်းရန် လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ဖောက်သည်တစ်ဦးက မိမိအပေါ် ရန်လိုသည့် အပြုအမူတစ်ရပ် ပြုသည့်တိုင် မိမိအနေဖြင့် တူညီသော အပြုအမူမျိုးဖြင့် မတုံ့ပြန်သင့်ပေ။
ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သော ကျင့်ဝတ် – ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သော ကျင့်ဝတ်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အပြုအမူအတွင်း အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အခါ မိမိ၏ နာမည်အပြည့်အစုံ၊ ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် ရာထူးအပြည့်အစုံကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုမှုကို လွှမ်းမိုးရန် မကြိုးစားဘဲ တစ်ဖက်သား ပြောကြားမှုအား စိတ်ရှည်လက်ရှည် နားထောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
စာများ ရေးသားခြင်း – လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော စာရေးသား ဆက်သွယ်မှုတွင် တိုတိုနှင့် လိုရင်းကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ စာရေးသားသည့် လေသံသည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကာ ကိန်းကြီးခန်းကြီးမနိုင်ဘဲ နည်းလမ်းတကျ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
စုစည်းနိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှု – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးသည် လိုအပ်သည့် အရာကို အလျင်အမြန် အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်းခွင်သည် သပ်ရပ်ကာ စုစုစည်းစည်း ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ချိန်းဆိုထားမှုများနှင့် တင်ပြမှုများအတွက် လိုအပ်သည့် အရာများကိုသာလျှင် မိမိ၏ လက်ဆွဲအိတ်ထဲ၌ ထည့်ထားသင့်သည်။
တာဝန်ခံမှု – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များသည် မည်သည့်အချိန်၌မဆို မိမိတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက် တာဝန်ခံထားရသည်။ အမှားတစ်ခု လုပ်မိပါက ယင်းအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းရသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအပေါ် အပြစ်ပုံချရန် ကြိုးပမ်းခြင်း မပြုအပ်ပေ။ မိမိကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး အနေဖြင့် အမှားလုပ်မိပါကလည်း တာဝန်ယူကာ ယင်းကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ရသည်။
ထို့ကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦး ရှိရမည့် စရိုက်လက္ခဏာရပ်များနှင့် လျော်ညီသောသူများကိုသာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များဟု ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားအပ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်
Posted in EditorialsTagged ပရော်ဖက်ရှင်နယ်